Dowlada Sacuudiga oo soo riday gantaallo Yemen lagaga soo riday – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDowlada Sacuudiga oo soo riday gantaallo Yemen lagaga soo riday
Hiiraan Xog, Mar 26, 2018:- Ciidammada Sacuudiga ayaa sheegay in ay soo rideen toddobo gantaal oo Jabhadaha Xuutiyiinta ah ee Yemen ay Sucuudiga ku soo rideen.
Wakaaladda wararka Sacuudiga ee SPA ayaa sheegtay in sidoo kale gantaallo lagu riday magaalooyinka Najran, Jizan iyo Khamis Mushait.
Jabhadaha Xuutiyiinta ah ayaa gantaallo badan ku ganay Sacuudiga billihii u dambeeyay.
Iiraan way diiday in ay hubaysay jabhadaha dagaalka kula jira Dawladda Yemen iyo xulafada uu Sacuudigu hoggaaminayo kaas oo socday tan iyo bishii Maarso ee sannadkii 2015kii.
Iiraan waxay sheegtay in gantaalladu ay yihiin “ficillo ka madax bannaan” oo loogu jawaabayo haysashada xulafada uu Sacuudigu hoggaaminayo.